လုပ်ငန်းကြီးတွေ Facebook ကို စတင်စွန့်ခွာနေပြီ – AsiaApps
တချို့သောသူတွေအတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက်လို့တောင် တင်စားရမယ့် Facebook ကြီးကတော့ user တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ရယူသုံးစွဲနေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရပြီး တရားတဘောင်တွေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Cambridge Analytica ကုမ္ပဏီနဲ့ facebook တို့ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်တွေပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ #deletefacebook campaign ကြီးကိုစလုပ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး facebook အပါအဝင် social media တော်တော်များများမှာ အသံတွေညံနေခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Telsa နဲ့ Space X တို့ကသူတို့ရဲ့ facebook page ကိုအပြီးဖျက်သွားခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ Playboy မဂ္ဂဇင်းကြီးက သူတို့ရဲ့ follower ၂၅သန်းကျော်ရှိတဲ့ page ကြီးကိုဖျက်သွားခဲ့ပါပြီ။
လက်ရှိမှာတော့ Playboy ဟာ facebook ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ social media တွေမှာပဲ ဆက်ပြီးတော့ လည်ပတ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Twitter နဲ့ Instagram တွေမှာ Playboy ရဲ့ facebook ပေါ်မှာထားတဲ့ သဘောထားကိုကြေငြာထားပြီး Playboy အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှပြောခဲ့ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သလို facebook ရဲ့ policies တွေဟာ သူတို့နဲ့ မကိုက်ညီတော့တာကြောင့် facebook ကိုစွန့်ခွာဖို့ဖြစ်လာပြီလို့ ပြောထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲဆိုတာကိုပြောနိုင်ဖို့ရာသိပ်ကို ရှုပ်ထွေးလွန်းနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီး ဇူကာဘတ်တစ်ယောက် တရားခွင်တက်မယ်မတက်ဘူးဆိုတာတောင် နာရီပိုင်းနဲ့အမျှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပါ။
Facebook နဲ့ Cambridge Analytica အနေနဲ့ရော ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းပြမလဲဆိုတာကို အက်မင်ကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပါပြီ။ Facebook ကြီးပြောင်းလဲသွားမှာလား? ပိုင်ရှင်အသစ်ဆီရောက်သွားမှာလား? ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြမှာလဲဆိုတာကို သိရတာနဲ့ ချက်ချင်းသတင်းပေးမှာမို့ stay tuned နေပါလို့…..